Dowel Ukhonkolo: izinhlobo kanye ukufakwa
Dowels for ukhonkolo yazuza okwandile njengoba base obandayo ukuze ukusetshenziswa ngezikulufo kanye amahange. izakhi okunjalo libhekwa ku izinhlobo amandla ukhonkolo, ngenxa yezinga lazo okunamathiselwe okunokwethenjelwa kuncike. Kumila ukhonkolo kungenzeka ibe mibi kakhulu njengenkemba, ne yokugcina, futhi ukukhanya (ukungena nakwamanye amazwe) has a ukumelana ongaphakeme ukuba kokucindezelwa, kanye ezisindayo - kunalokho, ngenxa yalesi sizathu-ke kungase kube isikhathi eside ngaphansi kwengcindezi.
Umgomo we operation kuyinto dowel Kuyefana nangomuntu nhlonhlo. On umzimba kukhona izimpondo, isebangeni ngokumelene backstop, ngenxa yalokhu akunakwenzeka ukuyikhipha emva kokufakwa odongeni. ukuhlanganisa Final futhi ephelele kwenzeka ngemva kokuba ufakwa screw. Ngenxa iminyaka eminingi propping entabeni ngokuphephile labetibambile ogangeni.
Isetshenziselwa yokukhiqiza Imigudu impahla incike mass into edinga ukuqala koshintsho. Dowels for plastic ukhonkolo efanelekayo ezincane usayizi imiklamo, isibonelo, ifenisha. Steel embodiments asetshenziselwa izinto umxhwele nakakhulu, isimiso sabo wokusebenza iyafana element plastic.
Injongo iwukuba iziqobosho amapayipi zalapho, piping, imishini kagesi. Idinga imishini ngaphambi ezifanele usayizi imbobo, okuyinto uphawuleka yokusetshenziswa, ukuhlanzwa nothuli, kuphela emva ukuthi dowel sifakwe kanye yesikebhe.
Uma kudingekile, ukumiswa wezimpahla esindayo ngesisekelo ukhonkolo wasebenzisa ububanzi esiphezulu screw. Okubalulekile ukuhambisana isilinganiso dowels ngobude ezithile zenkonzo umthwalo futhi ukukhethwa efanele iziqobosho ngokwabo, kusukela kumelwe babe abaphile waqhubeka isikhathi esijana.
Ngaphambi kokusungulwa amadivayisi efanayo esetshenziswa "tube" izingodo. It ifakwe umgodi ezomile, noma ezigcotshwe nge glue, usimende nosimende noma alabhaste. Lo mklamo akahlukile ukuqina futhi waba nokwethenjelwa, ngenxa ukuncipha yesixazululo nokwesula izinkuni.
Okwamanje, ngokwenza amahange ukuze ukuphatse usebentisa izinga okusezingeni plastic (isib polyethylene) noma steel lihambisana izingxenye yenethiwekhi (ngezikulufo, izinzipho kanye ukuhluka yalo) nge enamathela ukumelana ukuvimbela okuvela kuyo ukugqwala, noma insimbi engagqwali kukhiqizwa.
Dowel-nail samuntu elula. Ngokungafani izipikili ezivamile, ukuze ukufakwa yayo indlela esetshenzisiwe screwing.
Ngokusho indlela yokusetshenziswa lwazo zonke izinto zihlukaniswe amaqembu amabili. Imigudu Standard afakwa yamba (reamed) izimbobo base ngaphandle okubambelela isakhiwo.
Ngenxa yokuthi le nqubo isetshenziswa kuphela ku ezimbili izindawo ukufakwa, ngenxa ukungafani izimbobo nezingxenye afanayo ekhiqizwa Uhlaka ihange, esikisela ukukhiqizwa ngesikhathi esisodwa base kanye nesakhiwo. Lokhu kungabi sengxenyeni kungenzeka lokungafani.
ongakhetha ezinjalo isetshenzisiwe in ezahlukahlukene kwezicelo, kodwa ukusebenza kahle enkulu uphawuleka ukufakwa emnyango futhi zamafasitela e eziyisisekelo perforated kanye okuqinile. Futhi, ngenxa yokusebenzisana yabo kungenzeka ukususa ngenkathi ngokushesha nokugcina uhlobo olufanayo ibhokisi.
Evamile ukwakhiwa dowel is zihlukaniswe ngamaqembu amabili ukusetshenziswa:
nesimiso amahange iziqobosho for core nomgodi laminated udonga ukwakhiwa;
ongakhetha Ukunwetshwa izindonga zezindlu zilwane okukhulu.
Uhlelo olusha senzelwe ukusetshenziswa ku umkhakha nokuphila kwansuku zonke. Wathola okwandile ngenxa ehlukile izici lobuchwepheshe, ubuchwepheshe okusezingeni eliphezulu kanye operation lula.
Chemical ihange Hilti esetshenziselwa induku nithela izingxenye izinjongo ezihlukahlukene. impahla Composite idaliwe kusuka okuqinile zokwenziwa resin inikeza amandla anele. Phakathi sezici Kumele kuqashelwe nokwanda okuphawulekayo izinto izinga ezingeni kanye ukwa eqine. izakhiwo Chemical ngcono ikhwalithi steel imikhiqizo ukufakwa ukudlula ezahlukeneyo ejwayelekile. Le miphumela ivumela ukufeza adhesion kakhulu futhi ingxenye isizinda shaft, ne iyelapheka zokwenziwa resin kwengoma.
Chemical siyazimelela Hilti-elementi ezimbili ivumela izakhi okunamathiselwe nge isisindo ngaphezulu iyiphi eziphathekako wokwakha izindiza. Izinga eliphezulu ukubekwa uphawu kuyinto inzuzo eyengeziwe. Kufeza indima ekhethekile ukusebenza ezimweni ezimanzi. Ezinye izinhlobo izisekelo ungavumeli kumiswa eliphezulu yasibamba imikhiqizo metal ngensimbi noma plastic dowels. Lokhu kusho ukusebenzisa zokwakha okuxekethile, phakathi okuyinto itshe yemvelo, isitini eziyize nokhonkolo evundile.
Dowels senzelwe imithwalo esindayo, wenza metal Alloys, futhi ifakwe kochungechunge izakhi (imishudo nezikhonkwane). Ziyakwazi efanelekayo ukufakwa ephakamisa ukuphakamisa, namasango, egalaji futhi ilanga awnings. Ngokuhambisana nemithetho ukuphepha, ngoba nokubopha ezingamanga ongakhetha ophahleni metal ozofakwa, njengoba ngesikhathi umlilo ancibilike epulasitiki kanye okusongela ukulahla ophahleni.
Elements ngokuba impahla ukungena nakwamanye amazwe kungenziwa agibele amahhashi ngaphandle izimbobo imishini. Dowel for ukhonkolo kanye isitini ingena kalula odongeni usebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela ejwayelekile ngenxa intambo enkulu ohlangothini zangaphandle ithiphu kokuba ukufana ne Perov sokuprakthiza.
Sici sici umklamo. Limelela isici nerasporny kokuba ziboya longitudinal. Lesi sakamuva ezidingekile ukuze uvimbele ngokushintshana. uvala alo ibhodi ukuqinisa izimbambo nabo bebekhona. Izimbambo ukunweba kusukela indiza contact yokusekela usebe akunqandi ukuwela ukuvulwa. okufana okunjalo yazuza chithi saka yasibamba baseboards, emashalofini futhi izakhi ukukhanyisa. Ubukhulu Standard we dowels yalolu hlobo nokwenza futhi 14h35 5h25 mm.
Dowel ngoba foamed futhi evundile
Sinezinsimbi okusezingeni eliphezulu, kakhulu kwandisa endaweni yisibopho ukuvulwa isici. Lokhu kudinga womshini owandulelayo ukuvuleka.
Classical inayiloni dowels for ukhonkolo, ogama intengo siqala ruble 200 izingcezu 100, obanzi kunayo, ungakwazi ukuqeda le ingxenye eyinhloko nobunzima obandayo. Ziyakwazi kufanelekile yimuphi ukwakhiwa udonga futhi zisetshenziswa kanye ngezikulufo nge usayizi kufika ku-15 mm.
Dowel esiqhutshwa wazalela esihambelanayo ubukhulu usebenzisa izimpondo, ebheke emuva, ngemuva wedging linamathela sinamazinyo amakhulu etholakalayo.
Futhi, izingxenye yendabuko amahange esetshenziselwa ukhonkolo evundile. Ngenxa yalezi izimbobo yamba ngokuhambisana ubukhulu babo core. Yasibamba okhandwe ngesando emgodini ngesando, nokugcinwa okunikezwa screw base propping futhi khona emaphethelweni ngesimo Kuvunguza.
Isici esiphawulekayo Imigudu jikelele ukuthi ngenkathi ukulungisa ukuze base eziyize kukhona "ngekhompyutha" isikhala eziyize. Ihange siyazimelela for ukhonkolo yandisa e ngalo ingaphakathi futhi kuvikelwe therein. Uma kusetshenziswe ukhonkolo noma nosimende olususelwa unclamping kuba nabo izindonga imbobo kwathela.
Proper ukusetshenziswa dowels for ukhonkolo kudinga ukukhethwa imishini efanelekayo, obandayo hardware. Phakathi nomsebenzi kubalulekile ukuqapha perpendicular isiqondiso sokuprakthiza nendaba, kulesi simo kungavunyelwe ukusetshenziswa sokuprakthiza ezigugile noma cha ezifanelekile nsuku ethile.
Sika umgodi kumele kahle bahlanza kusuka uthuli impahla izinsalela. Ukubaluleka iyalandelwa ukujula ubukhulu. Sokuzivivinya ekhiqizwa zokwakha ukukhiqiza uhlobo okuqinile, akufanele asetshenziselwe amapuleti amashidi. Imisebenzi nge gas Concretes libhekene reaming izimbobo ezincane, uma kuqhathaniswa nabangu uqobo dowel.
Ukuphila kwabantu: inchazelo, inhloso, izimo
Umlando we-ballet waseRussia: ukuvela nokuthuthuka
Hydrogen sulfide nokugeza. Izinkomba kanye contraindications